Nispakhya National Weekly ( निस्पक्ष राष्ट्रिय साप्ताहिक ) online News Paper: पत्रकार र विश्लेषकलाई समेत माओवादीले छक्याइदियो !
पत्रकार र विश्लेषकलाई समेत माओवादीले छक्याइदियो !
- जीवराम भण्डारी
सर्वोच्च अदालतले म्याद थप्न नमिल्ने निर्णय गरिसक्यो, मैले फलाना नेता र मन्त्रीलाई भेटँ, हैसियतदार पत्रकार पनि भेटँ जस्ता प्रस्ट कुरा हुने गर्थे । १४ जेठभित्रै संविधान बन्छ, जे जति मिल्दैन तिनलाई आगामी निर्वाचित निकायले टुङ्गो लगाउँछ, कुरा यही हो । विचरा ती कड्केर जवाफ दिनेहरू जेठ ९ गते साँझदेखि ठण्डाराम भए । अनि उनीहरू नै आफ्ना पुराना प्रश्नकर्तासँग भन्न थालेका छन्, हेर्नुस् सबै ठाउँको राजनीतिक
कुरा बुझ्न र विश्लेषण गर्न सकिन्छ नेपालको सकिंदैन ।